နောင်ဂျိန်တို့ မိသားစု: သမီးလေးးးး ၃၅ပတ်
မေမေတောင် သမီးလေး အကြောင်းမရေးဖြစ်တာ တော်တော် ကြာသွားပီနော်... ကြာဆို..သမီးလေးရေ..မေမေ မအားတာရယ်...စာရေးရမှာပျင်းနေတာရယ်နဲ့ မေမေ မရေးဖြစ်သေးတာ..။
ကလေးလေးက သမီးလေးဆိုတာ သေချာသလောက်တော့ ရှိနေပေမဲ့.. ဒီက ဆရာဝန်တွေက သမီးရေ... အတိအကျ လုံးဝမပြောဘူး။ ဒီတော့ သမီးဖေဖေက ယောင်္ကျားလေးရူးနေတော့ သူ့မှာ မျှော်လင့်ချက်အပြည့်နဲ့ပေါ့...။ မွေးပီးမှ အတည်ပြုမယ်ဆိုပဲ..။ ဒါပေမဲ့ ဆရာဝန်က တနေ့တခြား ငြင်းမရတော့တဲ့ အခါ.. သမီးလေးဖြစ်ဖို့များတယ်ဆိုတဲ့ စကားနဲ့ သမီးဖေဖေလည်း သမီးလေးဆိုတာ အတည်ပြုလိုက်ပီ..သမီးရေ..။
မေမေနဲ့ဖေဖေရဲ့ ၂ဖက်သောမိဘတွေကလည်း သမီးလေးဆိုပီး ပျော်နေကြတာပေါ့..။ သမီးဖေဖေ ဖက်က သမီးဝမ်းကွဲကိုကို က အင်္ဂလန်မှာ မွေးပီး မြေးဦးယောင်္ကျားလေးရပီးတဲံ အခါ ဖေဖေဆီမှာ မြေးဦးမိန်းကလေးဆိုတော့ သမီးလေးကို သဲသဲလှုပ် နေကြတာပေါ့..။ မေမေတို့ဖက်ကတော့ အစထဲက မိန်းကလေး လိုချင်နေတာဆိုတော့... တအားပျော်နေကြလေရဲ့..မေမေ့ကို နောက်တယောက်တောင် ထပ်ယူခိုင်းနေသေးတယ်.. မေမေ့သမီးလေးရေ... သမီးလေးက တနေ့တခြား ထွားထွား လာလိုက်တာ.. အခုဆို မေမေ နေရထိုင်ရတာ မသက်သာတော့ဘူး။ ညညဆိုလဲ အိပ်လို့ မရဘူးသမီးရေ.. သမီးလေးက တအားကို လှုပ်တာ.. အထဲမှာ နေရ ကြပ်နေလား..မေ့သမီးလေးရေ..။
အစကတော့ မေမေတို့မှာ သမီးလေး လှုပ်တာ မခံစားရတော့ စိုးတွေရိမ်လိုက်ရတာ.. ဒါပေမဲ့ ဆရာဝန်နဲ့ ပြတိုင်း တချိန်လုံး လှုပ်ရွနေတဲ့ သမီးလေးကို ကြည့်ပီး ဖေဖေနဲ့ မေမေမှာ အပြုံးပန်းတွေ ဝေလို့...။ သမီးလေးရေ.. သမီးလေးမှာ လက်ချောင်းခြေချောင်းတွေ စုံရဲ့လားဆိုပီး စိတ်ပူနေတဲ့ မေမေ့ကို သမီးလက်ချောင်းလေးတွေ ခြေချောင်းလေးတွေ မြင်ရတဲ့နေ့က ပျော်လိုက်ရတာ။
သမီးလေးရေ..တရက်မှာတော့ သမီးရဲ့ နဖူးလေးရယ် မှိတ်ထားတဲ့ မျက်စိလေးရယ် နှာခေါင်းချွန်ချွန်လေးကို မြင်လိုက်ရတော့လဲ ပျော်လိုက်ရတာ... ဖေဖေနဲ့မေမေမှာ ရူးကြပြန်ရော.. အိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့ သမီးဖေဖေကို မေမေက ချစ်ရေ..လုပ်ပြပါဦး သမီးပုံလေးဆို ...သူက ခေါင်းလေးကိုမော့ပီး သမီးပုံစံလေး လုပ်ပြလို့....။ ဘာလို့ဆို သမီးလေးက ဖေဖေနဲ့ တူတာ အဲ့ကတည်းက ပဲလေ..။ မေမေ့မှာ သတိရတိုင်း..ဖေဖေ့ကို သမီးပုံလေး လုပ်ပြပါဦးဆို... သမီးဖေဖေကလဲ လုပ်ပြရတာ အမောပဲ..သမီးရေ..။
ဒီလိုနဲ့ တခုသော ဆေးခန်းပြရက် တရက်မှာ မျက်နှာလေး မြင်ချင်လှတဲ့ မေမေတို့ကို သမီးလေးက ဖျက်ကနဲ ပြလိုက်ပြန်တယ်.။ မေမေကတော့ မမြင်လိုက်ရပေမဲ့ ဆရာဝန်နဲ့ သမီးဖေဖေက သေချာမြင်လိုက်သတဲ့..။ ဆရာဝန်ကဆို ဟယ်..ကလေးက အဖေနဲ့ ချွတ်စွတ်လို့ ပြောလိုက်တဲ့အခါ သမီးဖေဖေ မျက်နှာကြီးက ပြုံးဖြီးဖြီးနဲ့ပေါ့... မေမေက သေချာမမြင်လိုက်ရတော့ ...အိမ်ရောက်တာနဲ့..ဖေဖေ့ကို သမီးလေးပုံ လုပ်ပြပါဆို..ဖေဖေက မမောနိုင်ဘူး..လုပ်ပြလေရဲ့.. တခါတလေ..မေမေတို့ လမ်းထွက်ရင်လဲ သမီးလေးပုံ လုပ်ပြလို့ မေမေက ပြောရင် ဖေဖေက လုပ်တာပဲ...။ သိပ်ချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲ..။ သမီးလေး ထွက်လာရင် မေမေက အသားဖြူပါစေပဲ ဆုတောင်းတော့..ဖေဖေက ထုံးသုတ်ပေးလိုက်တဲ့..။
သမီးလေးရေ... ဘာလိုလိုနဲ့ နေ့တွေကို လတွေစားပီး သမီးလေးဟာ အခုဆို ၃၅ပတ်ထဲရောက်လာပီနော်.. ၃၂ ပတ်တုန်းကတော့ သမီးလေးဟာ ၁၈၀၀ ဂရမ်ရောက်နေပီပေါ့..။ အခုဆို သမီးလေး.. ၂၀၀၀ ဂရမ်ကျော်ရောပေါ့နော်..။ ဖေဖေကတော့ ညညဆို သမီးလေးကို ကလိထိုးရတာနဲ့ မွှေးမွှေးပေးရတာနဲ့ စကားပြောရတာနဲ့... .. သမီးလေး..နားလည်ရင်တဲ့ အရွယ်ကျရင် မေမေ ပြောပြမယ်နော်..။ တခါတလေ ကျတော့လဲ မေမေနဲ့ ဖေဖေ ရန်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကျရင် မေမေက သမီးလေးကို သမီးရေ..ယောင်္ကျားမယူနဲ့ ယောင်္ကျားတွေက မကောင်းဘူးပြောရင် ဖေဖေကလည်း မေမေ့ဗိုက်ကို ပွတ်ပီး သမီးရေ... ယူသာယူ.. ကောင်းသူတွေ့ရင်တဲ့... တခါတလေ စကားနိုင်လုကြတဲ့အခါမှာလဲ ...သမီးလေးရေ.... ဆိုပီး ၂ယောက်သား ကလေးကိုပဲ ပွတ်ပီး ပြောချင်တာတွေ ပြောနေကြတာ.သမီးလေးရေ...။
သမီးလေးရေ.... သမီးကသာ ကိုယ်အလေးချိန်တွေ တိုးလာပေမဲ့ မေမေ့မှာတော့ တနေ့တခြား လျော့လာလိုက်တာ သမီးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားတဲ့ ဧပြီလမှာရှိတဲ့ အလေးချိန်လောက်ပဲ ရှိတော့တယ်..သမီးရေ..။ အခုဆို မေမေ ၃ကီလိုကျော် လျော့သွားလေရဲ့.။ မေမေ့မှာ သမီးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်လို့ ဆီးချိုဖြစ်နေတယ်တဲ့..ဒီတော့ မေမေ ဆေးရုံလဲ တရက်တက်လိုက်ရသေးတယ်..သမီးလေးရေ.. အစားအသောက်ဆိုလဲ အပြုတ် အကင် ကလွဲပီး ဘာမှမစားရတော့ဘူး။ ငှက်ပျောသီးဆိုလဲ ကြီးရင်တခြမ်း ဖရဲသီးဆိုလဲတစိတ် ..စတော်ဘယ်ရီဆိုလဲ ချိုရင် ၃လုံးပဲစားရမယ်တဲ့..။ ဒိန်ချဉ်သောက်ရင် နို့၁၀၀ မီလီပဲသောက် နို့ကြီးးပဲဆို ၂၀၀ မီလီသောက်တဲ့.. ဘာပဲစားစား ညီမျှအောင် ဟိုဟာလေးနဲနဲ ဒီဟာလေးနဲနဲပဲ စားတဲ့..။ အချိုဆိုတာ လုံးဝမစားနဲ့တဲ့..။ ရေခဲမုန့် သိပ်ကြိုက်တဲ့မေမေ.. ရေခဲမုန့်မစားရတာလောက် စိတ်ညစ်တာမရှိဘူး။ ဖေဖေက ဒီနှစ်မေမေ့မွေးနေ့မှာတောင် ကိတ်မုန့်မကျွေးဘူး သမီးရေ..။ သမီးလေး..တခုခုဖြစ်မှာဆိုးလိုးတဲ့..။ မေမေလဲ ဘာမှ စားချင်စိတ်မရှိပေမဲ့ စားနေရတာပဲ..ဒီကြားထဲ သမီးလေးက မေမေ့ဆီမှာ ရှိသမျှ အဆီအနှစ်တွေ အကုန်ယူလိုက်တော့ မေမေ သွေးအားနည်းရောဂါပါ ဖြစ်နေလေရဲ့ သမီးလေးရေ..။ ဒါပေမဲ့ အခုတော့ ပြန်ကောင်းသွားပီ ထင်ပါရဲ့...။ အခုဆို မေမေ ပိန်ပိန်လေးမှာ သမီးလေးက မေမေ့ဗိုက်မှာဖရဲသီးကြီးကြီးတလုံး ကပ်ထားသလိုပဲတဲ့.. အစကတော့ ဖေဖေနဲ့ မေမေမှာ သမီးဗိုက်ကမထွက်ဘူး မထွက်ဘူးနဲ့ အခုတော့လဲ ထွက်လာလိုက်တာ ဗိုက်ကြီးက ..မေမေ့မှာ လမ်းလျှောက်ရခက်နေပီ ။
ညညဆိုလဲ သမီးလေးကမအိပ်တော့ မေမေ့မှာ မနက်မိုးလင်းခါနီးမှ အိပ်ရတယ်.။ မနက်ဆို မေမေက မထချင်တော့ဘူး။ သမီးလေးရေ.... ခနတော့ အားတင်းထားဦးနော်... ဗိုက်ထဲမှာ အနေကြပ်နေပေမဲ့ ၃၆ပတ်ကျော်မှ မွေးရတာ အဆင်ပြေမှာတဲ့.. အဲ့ဒါမှ သမီးလေးရဲ့ ဦးနှောက်တွေ အကုန် ဖွံ့ဖြိုးမှာတဲ့..။ဖေဖေကလည်း မေမေ တခုခုထလုပ်လိုက်လို့ နာတယ်..ဘာတယ်ဆို သမီးလေးကို တတွတ်တွတ်နဲ့..မထွက်လာနဲ့ဦးနော် သမီးလေးဆိုပီး တောင်းပန်ရတာ အမော..။ ဟိုသူငယ်ချင်း ချော်လဲ လို့ ဆိုလဲ မေမေ့ကို ချော်လဲမှာ စိုးရိမ်ရတာ အမော.. သမီးလေးကို တခုခု ဖြစ်သွားမှာ ဖေဖေတို့ မေမေတို့က မလိုလားကြဘူးလေ..။
ဒီကြားထဲ သမီးလေး မွေးလာရင် အိမ်ကျယ်ကျယ်လေး နေရအောင်ဆိုပီး အခန်းကျယ်၂ပါတာ ငှားရတော့ မေမေတို့ မှာ ငွေရေးကြေးရေးတင် အကုန်အကျများတာ မဟုတ်ပဲ စိတ်ရှုပ် အလုပ်ရှုပ်ပေါ့ သမီးရေ.. အိမ်ရှာရတာ လဲ မလွယ်သလို ရပြန်တော့လဲ ပြောင်းရ ရွှေ့ရ နေရာချရတာနဲ့ မေမေ့မှာ ခုမှ အသက်ရှူနဲနဲချောင်တော့တယ်..။ ဒါတောင် အခု ထက်ထိ အိမ်သစ်မှာ နေရာ ချရတာ ..စိတ်တိုင်းကျ မရသေးဘူးသမီးလေးရေ..။
သမီးလေးရဲ့ အိင်္ကျီအသစ်တွေကို ဖေဖေက မေမေ့ကို လျှော်ခိုင်းထားလေရဲ့..ကလေးကို အင်္ကျီတွေကို လျှော်ပီးမှ ပေးဝတ်တဲ့..။ သမီးလေး အတွက် လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေတောင် သေချာ မဝယ်ရသေးဘူး..သမီးလေးရေ..။
မေမေ့အတွက်တောင် ဆေးရုံတက်ရင်ယူရမဲ့ ပစ္စည်းတွေ သိပ်မစုံသေးဘူး။
၂၇ ရက်နေ့ ဆေးရုံမှာ ဖေဖေရော မေမေရော သင်တန်းတက်ပီးမှပဲ လိုတာတွေ ကို သီးသန့်ထားတော့မယ်.. သမီးလေးရေ...။ နောက်အပတ်ကျမှ သမီးလေးအတွက် မားမား သင်တန်းသွားတက်ထားတာလေး.. ကို ပါပါးမားမား သင်တန်းတက်ပီးမှပဲ ရေးတော့မယ်..သမီးလေးရေ...
Posted by နောင်ဂျိန် at 7:25 PM
တန်ခူး July 26, 2013 at 7:39 AM
မိခင် ဖခင် မေတ္တာက သမီးလေးဗိုက်ထဲမှာရှိနေကတည်းက ဘာနဲ့ မှနှိုင်းလို့ မရအောင်ကြီးမားလိုက်တာနော်. ချစ်စရာသမီးလေးက ဗိုက်ထဲကတည်းက ဖေနဲ့ မေရဲ့ တီးတိုးဖော်ဖြစ်လို့ရေခဲမုန့် ကြိုက်တဲ့မေ့ကို တခြားအကြောင်းနဲ့ သာမစားခိုင်းရင် ဘယ်နေနိင်လိမ့်မလဲနော်. သမီးလေးအတွက် ခုကတည်းက အရာအားလုံးစွန့် လွှတ်ဖို့ အသင့်ဖြစ်နေတဲ့မိခင်မေတ္တာလေ. ဖေဖေသမီးလေးပုံလုပ်ရင်ဓာတ်ပုံခိုးရိုက်ပြီး ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်တင်ပေးပါလား. ကြည့်ချင်လို့ 
maynyeinchan July 26, 2013 at 7:51 PM
Anonymous August 4, 2013 at 7:43 PM